Karatra Paositaly Avy Any Congo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2017 3:15 GMT
Mora ny mifantoka fotsiny amin'ny rivotra mifamahofaho ara-politika ao RDC miaraka amin'ny fifidianana , ny fanambaràna ny fihodinana faharoa, ny fifandonana nahery vaika teo amin'ny kandidà ho filoham-pirenena roa tonta. Na izany aza, maro ireo bilaogera ao Kongo no nanoratra momba ny zavakanto, kolontsaina sy ireo fomban'izao tontolo izao hafa milaza fa miantraika amin'ny fiainana andavanandro ny politika.
Nanoratra momba ny Misère (etsy ambony) i Fred, izay mamahana bilaogy ao amin'ny Extra Extra, tantara an-tsehatra Kongoley avy amin'i Thierry Nlandu izay notsongaina avy amin'ny zavatra niainan'ny firenena teo ambany fitondran'i Mobutu ary mifototra amin'ny Waiting for Godot.
Tao Ibiza, niezaka ny naka ny hafanan'ny Kinoà (ireo Kongoley miantso an'i Kinshasa ho tanindrazany) izy taorian'ny herisetra vao haingana tao amin'ny toeram-pisotroana malaza iray ahitana teratany vahiny sy Kongoley izay “afaka mividy tonic 3 dolara”:
” Toa zava-dehibe hanalana havizanan-tsaina ho an'ny maro izay nandany andro vitsivitsy tamin'ny herinandro lasa nijanona tao an-tranony, nihaino ny fipoahana, ny baomba ary ny onjam-peo ny resadresaka, ary nanontany tena hoe ahoana ny fandehan'ny raharaha ratsy, ary nikasa hanangona sakafo sy rano bebe kokoa. Tsy isan'andro akory no misy ny fifandonana mitam-piadiana eo amin'ny manodidina anao, na izany aza. Afaka mitantara ny tantara tsara indrindra farafaharatsiny ireo izay tena niahiahy be indrindra. “
Nahita ny rivo-piainana nahafinaritra aho saingy somary nitebiteby tamin'ny fanahiana sy ny fisalasalana ny endrika falifaly. Tena Grahame Greene tanteraka, raha fantatrao ny tiako lazaina.
Mandritra izany fotoana izany, nanoratra i Kim Gjerstad fa ao Congo, izay sarotra ahitana boky, mitobaka ary indrindra indrindra fa maimaim-poana ny Mifohaza! , ilay boky Tilikambon'ny Vavolombelon'i Jevohah amin'ny dikanteny Frantsay ary tena malaza. Hoy i Gjerstad namintina mivantana: “Tsarovy fa misy ny helo kanefa tsy mbola tara izao hamonjena ny tenanao. Voaravaka literatiora maimaim-poana ny lalana mankany an-danitra. Tsy ratsy ho an'ny firenena tsy manana boky hovakiana.”
Tao amin'ny rakitsary Flickr, manana sary avy amin'ny sakafo mampiavaka ny ao an-toerana i Helene.rd: “Ao Isia, misy renimpianakaviana sasany mivarotra” kankana voanio”, ary mamoaka tsetsatsetsa maneno avy ao amin'ny lovia lehibe. Nankafy izany ny olona sasany niaraka taminay. Feno proteinina izy ireny! (Fr)